Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo booqasho ku tagay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo booqasho ku tagay Muqdisho
Mareeg.com: Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiirada, xildhibaano iyo mas’uuliyiin ayaa soo dhaweeyey madaxweyne Geelle.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa dhagax dhigi doono xarunta Akadeemiyad goboleedka afka Soomaaliga oo xaruntiisa noqon doonto magaalada Muqdisho, waxaana uu ka qeyb geli doonaa Munaasabada Maalinta Afka hooyo oo ka dhaceysa Hotelka City Palace.
Amaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa aad loo adkeeyey, iyadoo shalay uu magaalada ka dhacay qarax dad badan lagu laayey oo ay ka mid ahaayeen mas’uuliyiin.
RW Cumar C/rashiid oo dalka dib ugu soo laabtay kana hadlay qaraxii Hotel Central